Lesona 12: Ilay mpaminany feno ahiahy
Hodinihina mandritra ny herinandro: Jôna 1,2,3,4, Jer. 25:5, Ezek. 14:6, Apôk. 2:5, Lio. 9:51-56, Joda 1-25.
Tsianjery: "Ka moa Izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa?" - Jônà 4:11.
"Andraikitra mavesatra ny iraka nampanaovina an'i Jônà, kanefa afaka nanohana sy nanampy azy hahavita izany tamim-pahatokiana Ilay naniraka azy. Raha nanaiky tsy tamim-pihambahambana ilay mpaminany, dia ho afa-niala tamin'ny fitsapana maro sy ho nahazo fitahiana be dia be. Na izany aza anefa, dia tsy nahafoy an'i Jônà ny Tompo tamin'ny fotoana nandresen'ny fahakiviana azy. Raha niharan'ny fizahan-toetra mafy nitohitohy izy, dia narahin'ny fitahiana mahagaga koa izany, ka tokony ho nampahatanjaka ny fitokisany an'Andriamanitra sy ny heriny mahavonjy izany." - MM, t. 224.
"An'arivony no mety ho tratra amin'ny fomba mora sy tsotra indrindra. Ny avara-pianarana indrindra izay heverina ho lehilahy sy vehivavy maro talenta indrindra eto amin'izao tontolo izao, no matetika mahazo famelombelomana noho ny teny tsotra ataon'izay tia an'Andriamanitra sy afaka miteny an'izany fitiavana izany amin'ny fomba tsy amboarina, tahaka ny fitenin'ny olona eo amin'izao tontolo izao momba ny zavatra izay mahaliana azy indrindra." - HF, t. 232.
1. "Mpaminanin'Andriamanitra" ve no tezitra toy izao satria nanaiky ny famonjena ilay vahoaka nasain'Andriamanitra nitoriany teny? Ahoana no tokony handraisantsika izany fihetsik'i Jônà izany? Manam-paharetana amin'ny olony tokoa Andriamanitra na dia maneho fihetsika mifanohitra amin'ny fahazavana nomena azy aza izy ireo!
2. Toa mampiseho amintsika ny tantaran'i Jônà fa tsy mihevitra fotsiny ny famonjena ny olom-bery Andriamanitra fa liana fatratra koa te hanova ny mpanara-dia Azy. Ahoana no hananantsika "fo vaovao" sy "fanahy vaovao" na efa mahafantatra ny Tompo sy ny fahamarinana ankehitriny aza isika? Inona no maha-samy hafa ny hoe: mahalala ny fahamarinana sy ny hoe: voaovan'ny fahamarinana?
3. Vakio indray ny bokin'i Joda. Inona ny hafatra fototra ao amin'io boky io, ary nahoana no zava-dehibe indrindra ho antsika izany amin'ny maha-fiangonana antsika?
4. Nahoana ny fiasantsika ho famonjena ny fanahin'ny hafa no maha-tsara ny aim-panahintsika koa?
5. Na inona na inona antony mety ho nahatonga an'i Jona nanda tsy ho any Ninive, dia nasehon'Andriamanitra taminy mazava fa diso tokoa izy. Inona ireo toetra hasehontsika amin'ny hafa, izay mety haneho taratra izany fahadisoan'i Jônà izany koa?
Tsy nizotra nilamina tsy akory ny dian'i Jônà rehefa nandositra an'Andriamanitra izy. Voaelingelina ilay "fitsaharana" keliny rehefa niditra an-tsehatra tamin'ny fomba mahagaga Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tafiotra. Nandidy hazandrano hamonjy azy i Jehôvah rehefa saika maty an-drano izy.
Na izany aza, voatery nitsahatra hateloana tao an-kibon'ilay trondro be i Jônà, vao nahatsapa ny filany ny miankina tanteraka amin'Andriamanitra.
Indraindray isika tsy maintsy entina any amin'ny toerana izay tsy misy na inona na inona azon'izao tontolo izao atolotra mba hamikirantsika, mba hahatsapantsika fa i Jesôsy no tena ilaintsika.
Vakio ny vavaka nataon'i Jônà tao an-kibon'ilay hazandrano (jereo Jônà 2:1-9). Inona no antom-bavany?
Na dia tany amin'ny lalina aza i Jônà ary teo amin'ny toerana izay mampidi-doza tokoa, dia milaza ny amin'ny fitoerana masina ny vavaka nataony.
Hoy izy: "Voaroaka tsy ho eo anatrehanao aho, nefa mbola nanatrika ny tempolinao masina ihany."
Inona no mitranga eto?
Zava-dehibe ifantohan'io vavaka io ny tempoly, ary tokony ho ivo ifantohan'ny vavaka ankapobeny izany. Toerana tokana ihany mantsy no mety hahitana an'Andriamanitra ao amin'ny TT, dia ao amin'ny fitoerany masina izany (jereo Eks. 15:17, Eks. 25:8).
Tsy ny tempolin'i Jerosalema anefa no resahin'i Jônà eto fa ilay fitoerana masina any an-danitra (and 2:8). Eo no toerana misy ny fanantenana satria eo indrindra no misy an'Andriamanitra sy iavian'ny famonjena atolony antsika.
Takatr'i Jônà ihany izany fahamarinana izany nony farany. Nanandrana ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Novonjena izy. Ny zavatra takany voalohany indrindra rehefa naloan'ilay hazandrano izy, dia ny fitiavan'Andriamanitra azy, ilay mpaminany nandositra. Inoana fa nandray lesona izy (na dia tsy lavorary aza ny diany indraindray) ka fantany izao fa ny hany làlana azo antoka ho an'ny mpino dia ny mikatsaka ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra.
Koa nanapa-kevitra hanao ny adidiny sy hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra izy, ary nizotra ho any Ninive. Tsy isalasalana fa nandeha tamim-pinoana izy satria tanàna feno haratsiam-panahy indrindra no halehany, ary mety tsy hankasitraka izay lazain'ity mpaminany vahiny manome tsiny ny haratsian-toetrany ity i Ninive.
Indraindray isika mila misintaka miala amin'izao rehetra hita izao mba hanana fomba fijery vaovao momba ny zavatra iray. Mety ho tsy manam-paharoa sy sarotra inoana ity tantaran'i Jônà ity, izay avotra tamin'ny fomba mahagaga tao an-kibon'ny hazandrano. Mety hanampy anao handray izany amin'ny fomba fijery vaovao anefa ny fisintahanao miala amin'ny tontolo mahazatra anao (ary mety hilaina indrindra aza izany fomba fijery vaovao izany); amin'ny fomba ahoana?
Tontosa ny iraka
Tanàna miezinzeina tokoa i Ninive raha ampitahaina amin'ny tanàna sy vohitra ao Isiraely. "Tanàna lehibe (...), dia lalana hateloana" izany (and 3:3).
Vakio Jôna 3:10. Inona ny fihetsika nasetrin'ity tanàna ratsy fanahy ity ny hafatra nentin'i Jônà. Inona ny lesona azontsika raisina ho an'ny tenantsika avy amin'io tantara io, rehefa miezaka mitory ny hafatr'Andriamanitra amin'ny hafa isika?
Nanambara ny hafatr'Andriamanitra i Jônà rehefa nandeha tao an-tananan'i Ninive: "Rehefa afaka efa polo andro, dia horavana Ninive." Mivantana tokoa ilay hafatra. Na dia tsy misy tsipiriany voalaza aza dia miha-mazava fa nihaino tsara tokoa ny mponin'i Ninive (izy rehetra!) ka nino ny fampitandremana avy amin'i Jônà.
Namoaka didy ny mpanjakan'i Ninive, araka ny fomba fanao manokana tany Proche-Orient, mba hanehoana ilay fiovam-po nitranga. Nasaina nifady hanina sy nitafy lamba fisaonana avokoa ny olona rehetra sy ny biby (tsy voalaza ny amin'ny fomba nitafian'ny biby lamba fisaonana). Nidina niala tamin'ny seza fiandrianany ny mpanjaka ka nipetraka tamin'ny lavenona. Misy heviny manan-danja lehibe tokoa izany fihetsiny izany.
Vakio Jôna 3:6-9. Ampitahao amin'ny Jer. 25:5, Ezek. 14:6, sy ny Apôk. 2:5. Inona ao amin'ny lahatenin'ny mpanjaka no maneho fa azony tsara ny atao hoe fibebahana marina?
Fohy ilay toriteny sady mivantana kanefa feno fahamarinana mikasika ny tena fibebahana. Inoana fa niasa mahery tao am-pon'ireo Ninivita tokoa ny Fanahy Masina rehefa nitory teny i Jônà.
Tsy mba nanana tombontsoa tahaka ny Isiraelita izay nahalala ny tantara rehetra momba ny fitarihan'Andriamanitra azy tamim-pitiavana ny Ninivita, kanefa namaly tsara ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana izy ireo. Toy izao mantsy no nolazainy: "Andeha isika hiantoraka amin'ny famindrampon'Andriamanitra fa tsy amin'izay zava-bitantsika! Aoka hiantehitra tanteraka amin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany isika."
Mahavariana anefa fa i Jônà, izay efa nanandrana mivantana ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana, dia toa nihevitra fa tsy natao ho an'ny rehetra izany fahasoavan'Andriamanitra izany, ary ny olona sasantsasany ihany no afaka hisitraka ny fitsaharana avy amin'izany.
Nahoana no ampahany iankinan'aina tokoa eo amin'ny fiainan'ny Kristianina ny fibebahana? Inona ny tena hevitry ny hoe: mibebaka amin'ny fahotantsika isika, indrindra fa amin'ireo fahotana izay iverimberenantsika?
Misionera feno fahatezerana sy ahiahy
Mampalahelo fa tsy tapitra teo amin'ny toko faha-3 ny tantaran'i Jônà.
Vakio Jônà 4:1-11. Inona ny olan'i Jônà ? Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'izany toetra ratsiny izany?
Ny toko faha-4 dia manomboka amin'ny filazana ny fahatezeran'i Jônà tamin'Andriamanitra satria nahomby tokoa ny asa fitoriany. Nampitebiteby an'i Jônà ny mety hiheveran'ny olona azy ho adala. Hitantsika fa maka fotoana tsara Andriamanitra ifandaharany amin'ny mpaminaniny, izay mitondra tena tahaka ny zaza malaky tohina.
Voaporofo mazava eto fa ny mpanara-dia an'Andriamanitra mahatoky - eny, na mpaminany aza - dia mila fitomboana sy mbola manan-javatra tokony horesena.
"Nony ren'i Jônà fa nanapa-kevitra Andriamanitra tsy handrava ny tanàna, fa nibebaka tamin'ny fahotany izy ka nandray lamba fisaonana sy lavenona, dia tonga tao an-tsainy ny fiheverana fa hataon'ny olona ho toy ny mpaminany sandoka izy, ka dia tsy mba voalohany nifaly tamin'izany fahagagana avy amin'ny famelan-keloka izany. Very teo imasony ny tombam-bidy lehibe dia lehibe ananan'ireo fanahy tamin'io tanana mahantra io noho ny naha-saro-piaro azy tamin'ny lazany." - MM, t. 228 (Np).
Mahagaga ny fananan'Andriamanitra faharetana amin'ny mpaminaniny. Toa tiany tokoa ny hampiasa an'i Jônà ka rehefa nandositra izy dia nandefa tafiotra Andriamanitra ka nandidy hazandrano hitondra azy miverina. Ary na sorena aza izao i Jônà, dia indro Andriamanitra to hifandahatra aminy momba ny toetra ratsiny ka hoy Izy: "Moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao izao?" - Jônà 4:4
Vakio Lio. 9:51-56. Inona no itovian'ity tantara ity amin'izay nitranga ao amin'ny tantaran'i Jona?
"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" - Jao. 3:16; na araka izay nambaran'Andriamanitra tamin'i Jônà hoe: "Ka moa Izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omby roa alina sy iray hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa?" - Jônà 4:11. Amin'ny farany, tsy ny tenantsika fa Andriamanitra no Mpitsara faratampony ny fo sy ny saina ary ny antony manosika ny olona; tsy tokony ho velom-pankasitrahana tokoa ve isika noho izany?
Ahoana no ahafahantsika manana fangoraham-po sy faharetana amin'ny hafa toa an'Andriamanitra, na farafahakeliny maneho taratra izany fangorahana sy faharetana izany?
Voatahiry ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra
Toa nanana olana lavitra tsy araka ny anampoizana azy i Jônà. Toerana nampidi-doza tokoa i Ninive, kanefa toa tsy ireo Ninivita no olana ao amin'ny tantaran'i Jônà. Voarainy tsara ny hafatra ary nibebaka avy hatrany izy ireo. I Jônà, ilay misiônera, no hita ho olana teo amin'io asa fitoriana io.
Nilain'ireo Ninivita ny nandre ilay hafatra avy amin'Andriamanitra, kanefa mihoatra lavitra noho izany ny nilan'i Jônà nanao io dia misiônera nankany Ninive io, ka izany no antony tsy namelan'Andriamanitra azy tamin'izao.
Vakio ny bokin'i Joda. Amin'ny fomba ahoana no "hitehirizantsika ny tenantsika ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra" (Joda 21). Inona ny hevitr'izany?
Hoy i Joda ao amin'ilay bokiny fohy ao amin'ny TV: "Ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindrampon'i Jesôsy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. " - Joda 21.
Tsy tranga indray mandeha eo amin'ny fiainana tsy akory ny fanandramana manokana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Anisan'ny fomba azo antoka "hitehirizantsika ny tenantsika ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra" ny fanampiantsika ny hafa. Ao amin'ny andininy manaraka dia manasa antsika i Joda "hamindra fo" sy "hamonjy" ny hafa tsy ho main'ny afo.
Vakio Joda 20-23. Inona no voalaza eto izay mifandraika amin'ny tantaran'i Jona? Ary inona koa no ambaran'izany amintsika?
Niantso an'i Jônà ho any Ninive Andriamanitra satria inoana fa tsy dia nihevitra loatra ny amin'ny fifandraisany amin'ireo Asirianina izy talohan'io antso io. Azo lazaina fa tsy tia azy ireo izy; kanefa tsy azony an-tsaina velively ny tena fankahalany azy ka nahatonga azy handositra mihitsy mba tsy hifanerasera amin'izy ireo, na dia efa reny aza ny antson'Andriamanitra. Tsy vonona ny hiray monina amin'ny Ninivita any an-danitra i Jônà. Tsy nahay nitia tahaka an'Andriamanitra izy. Niantso an'i Jona ho any Ninive Andriamanitra satria tiany ny Ninivita, ary faniriany ny hitondra azy ireo ho any amin'ny fanjakany. Kanefa tia an'i Jônà koa Andriamanitra matoa niantso azy. Tiany hitombo amin'ny fanahafana Azy i Jônà eo am-piarahany miasa Aminy. Te hanome fitsaharana marina azy Izy, izay tsy azo raha tsy amin'ny alalan'ny fifandraisana mahavonjy Aminy sy ny fanaovana ny sitrapony. Ary sitrapon'Andriamanitra ny hanampiantsika ny hafa sy hanehoantsika amin'izy ireny ny finoana sy ny fanantenana ananantsika.
Toy inona ny fotoana laninao hiasana ho famonjena ny hafa? Amin'ny lafiny ara-panahy, amin'ny fomba ahoana no itondran'io asa io fitsaharana marina ao amin'i Jesôsy ho antsika?
Anisan'ny tantara mahaliana indrindra ao amin'ny Soratra Masina ny tantaran'i Jônà. Mpaminanin'Andriamanitra izy, olona nantsoin'Andriamanitra, kanefa dia nandositra ny antson'Andriamanitra! Tamin'ny fomba henjana no nandresen-dahatra an'i Jônà hanova ny fisainany sy hankato ny Tompo. Rehefa izany dia nanaiky izy, kanefa inona no nataony avy eo? Velon-taraina indray izy noho ny amin'ireo vahoaka izay nanaovany asa fitoriana noho ny antson'Andriamanitra, izay nibebaka marina ka tsy nanjo azy ny fandringanana izay tokony ho nahatra taminy raha tsy nibebaka izy ireo!
Izany ka olona be ahiahy! Tsy nanam-piadanana izy, hany ka hoy mihitsy izy hoe: "Koa mifona aminao aho ankehitriny, Jehôvah ô, esory ny aiko; fa aleoko ho faty toy izay ho velona." - Jônà 4:3.
Na i Jesôsy aza nilaza ny tantaran'i Jônà nanao hoe: "Ny olona tany Ninive hiara-mitsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka hanameloka azy; fa nibebaka izy tamin'ny nitorian'i Jônà teny; nefa, indro, misy lehibe noho Jônà eto." - Mat. 12:41. Lehibe noho i Jônà tokoa i Jesôsy! Tsy afaka ny ho Mpamonjy antsika Izy raha tsy izany.
Handinika an'i Jônà isika amin'ity herinandro ity ary hijery izay lesona azontsika raisina avy amin'ny ahiahiny sy ny tsy fananany fiadanana.
Mahagaga fa mpitory teny mahomby tokoa i Jônà. Anisan'izay tsy mazoto indrindra koa anefa izy, farafahakeliny tamin'ny voalohany. Na inona na inona asa nataon'i Jônà tamin'io fotoana io dia nampiato izany tamin'ny fomba mahery vaika ny antson'Andriamanitra. Raha tokony ho nandray ny ziogan'Andriamanitra teo aminy izy, ary nahatsapa fa mora ny ziogany sady maivana ny entany (Mat. 11:30), dia naleony nanapa-kevitra hahita "fitsaharana" amin'ny herin'ny tenany, ka nandositra nizotra tamin'ny làlana nifanipaka tanteraka amin'ilay toerana niantsoan'Andriamanitra azy halehany izy.
Aiza ilay toerana nantenain'i Jônà fa hahafahany miala amin'ny antson'Andriamanitra ka hahitany fiadanana sy fitsaharana? Nahomby ve ny kajikajiny? Vakio Jônà 1.
Tsy mba niato hifandahatra tamin'i Jehôvah akory i Jônà fa avy hatrany dia lasa nandositra. Maro ireo mpaminany ao amin'ny Baiboly no nanao toy izany koa rehefa nirahin'Andriamanitra (jereo ohatra Eks.4:13).
Mahaliana tokoa fa tsy vao izao tsy akory no niantsoan'Andriamanitra an'i Jônà hitondra ny hafany, araka ny hita ao amin'ny 2 Mpanj. 14:25. Tamin'io fotoana io anefa dia toa nahatanteraka tsara izay nangatahin'i Jehôvah taminy i Jônà.
Ireo boky mirakitra tantara sy momba ny arkeôlôjia dia milaza ny amin'ny halozan'ireo mpanapaka neo-asirianina izay nanjaka tao Proche-Orient fahiny nandritra ny taonjato fahavalo TlK, dia tamin'ny fotoana niasan'i Jônà tao Isiraely. Nanafika an'i Joda ilay mpanjaka neo-asirianina, 75 taona taorian'izany. Efa resy roapolo taona teo ho eo talohan'izany ny Isiraely sy Samaria, ary araka ny fantatra dia niditra tao amina fikambanana manohitra ny Asirianina ny mpanjaka Hezekia.
Tonga ankehitriny ny fotoana tsy maintsy hamaliana ny Asirianina. Milaza ny tantara mampalahelon'ny faharavan'i Lakisy, ilay tanàna mimanda lehibe sy mafy orina indrindra izay fiarovan'i Hezekia avy any atsimo, ny Baiboly sy ireo boky mirakitra ny tantara asirianina, ary koa ireo sary voasokitra teo amin'ny rindrin'ny lapa tao Ninive. Nisy soratra nataon'i Sankeriba milaza fa babo miisa roa hetsy mahery no efa azony tao amin'ny tanàna mimanda 46 izay noravany. Rehefa naka an'i Lakisy ny mpanjaka asirianina dia babo aman-jatony sy an'arivony no novonoiny tamin'ny tsato-kazo, ary nendahiny velona ny hoditr'ireo mpomba ny mpanjaka Hezekia mafana fo. Ny sisa kosa nalefany ho babo tany Asiria, nanao asa an-terivozona.
Tsy mampino tokoa ny halozan'ny Asirianina fa mihoatra noho ny fahita tamin'ny androny aza. Koa eo anivon'izany fanjakana izany ve no anirahan'Andriamanitra an'i Jônà ?
Tsy mahagaga raha tsy nety nandeha i Jônà.
Nandositra an'Andriamanitra? Efa nanao izany ve ianao? Raha eny, nitondra fahombiazana ho anao ve izany? lnona ny lesona tokony hotsoahinao avy amin'izany fahadisoana izany?